किन हुन्छ खोप लगाए पनि पटकपटक संक्रमण ? – Nepal Japan
किन हुन्छ खोप लगाए पनि पटकपटक संक्रमण ?
नेपाल जापान २७ भाद्र १२:१२
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर दैनिक रुपमा कम हुँदै गैरहेको छ । यो आर्थिक सामाजिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका छन् । देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विद्यालय खुल्न सुरु भएका छन् भने राजधानी लगायत ठूला शहरहरुमा यसअघि प्रतिबन्धित भएका क्षेत्रहरु पनि खुल्न थालेका छन् ।
कोरोना संक्रमणदर निकै घट्दै गएको र सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा कम हुँदै गएपछि एउटा उत्साह त पलाएको छ तर सचेत हुन सकिएन भने तेस्रो लहरलाई हामी आफैंले निम्त्याउने छौं ।
१ करोड १० लाख ले कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाएको र ५० लाखभन्दा बढीले पूर्ण मात्राकोा खोप लगाइसकेका कारण पनि संक्रमण कम हुन सघाउ पुग्यो तर पूर्ण खोप लगाएकाहरु पनिन संक्रमित भएर बिरामी भएका खबरहरुलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
खोप लगाए पनि सचेतता अपनाइएन भने पटकपक संक्रमण हुने देखिएको छ । तसर्थ कोरोनाबाट पुनः सङ्क्रमित नहुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डबाहेक अन्य उपाय नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । नेपालमा विभिन्न किसिमका भेरियन्ट फैलिरहेको हुनाले पनि पटक–पटक सङ्क्रमित हुनुपरेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
चिकित्सकहरू ती व्यक्तिमा एन्टिबडी विकास नभइसकेको वा कम समयमात्र एन्टिबडी शरीरमा रहेको बताउँछन् । गएको वैशाख महिनामा डा. शान्ता पौडेललाई पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएको थियो । अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै कोरोनासँंग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि डा. पौडेलले पीसीआर परीक्षण गराउनुभयो । पीसीआर पोजेटिभ देखिएपछि उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो । दुई साताको बसाइपछि डा. पौडेललाई कोरोना निको भयो ।
पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमण हुँदा ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्या देखापरेको थियो । कोभिसिल्ड खोप लगाएका कारण आफूलाई अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने गरी समस्या नभएको डा. पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई साउनको अन्तिम साता पुनः कोरोना पुष्टि भयो । होम आइसोलेसनमा १० दिन बसेपछि उहाँ अहिले नियमित अस्पताल जान थाल्नुभएको छ ।
यस्तै, आरोग्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत एकजना नर्सलाई तेस्रो पटकसम्म कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । उहाँलाई तेस्रो पटकसम्म कोरोना देखिएपछि आत्तिनुभयो । त्यसअघि उहाँले कसैलाई पनि तेसो पटक कोरोना भएको सुन्नुभएको थिएन । उहाँले तत्काल चिकित्सकलाई सोघ्नुभयो । चिकित्सकले यो सामान्य हो, सकभर आफैँ जोगिनुपर्छ भन्ने जवाफ पाएपछि उहाँ शान्त हुनुभयो ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई कोरोना पुनः सर्ने सम्भावना रहन्छ । दीर्घ तथा जटिल रोग भएका व्यक्तिलाई कोरोनाले पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्ने भएकाले ती व्यक्तिले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।